तपाईं "शब्दहरू" कसरी सम्झनुहुन्छ? प्रयोग गर्ने? म तपाईंलाई सिफारिस गरिएको अभ्यास सिकाउनेछु! | स्कूल जाँदै | जापान गाइड र सूचना |アクセス日本留学
तपाईं "शब्दहरू" कसरी सम्झनुहुन्छ? प्रयोग गर्ने? म तपाईंलाई सिफारिस गरिएको अभ्यास सिकाउनेछु!
अपडेट | जनवरी ०७, २०२२
नयाँ शब्दहरू कसरी सिक्ने? शब्दहरू सम्झन गाह्रो छ, हैन? अनि सम्झनासाथ बिर्सनु हुन्न र? (हाँसो) यस स्तम्भमा, म तपाईंलाई आफ्नो दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने "शब्द कसरी सम्झने" र "कसरी अभ्यास गर्ने" बारे सल्लाह दिनेछु। कृपया यसलाई प्रयास गर्नुहोस्।
① के तपाईं कोठामा सबै कुरा जापानी भाषामा भन्न सक्नुहुन्छ?
② के तपाईं आफ्नो "मनपर्ने चीजहरू" जापानी भाषामा परिचय गराउन सक्नुहुन्छ?
③ के तपाईं आफ्नो सप्ताहन्त र सप्ताहन्तको बारेमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ?
धेरै छोटो वाक्य र अभ्यास बनाउनुहोस्!
नयाँ "शब्दहरू" कसरी सम्झनुहुन्छ?
आजको स्तम्भमा, म तपाईंलाई कसरी सम्झने र अभ्यास गर्ने भनेर सिकाउनेछु।
यो विधि गाह्रो हुन सक्छ। तर यो ठीक छ।
कृपया यसलाई बिस्तारै प्रयास गर्नुहोस्।
तपाईंको कोठामा जापानी भाषामा "चीजहरू" भनौं।
त्यहाँ धेरै छन्। तपाईंसँग कस्तो प्रकारको चीज छ?
पीसी, स्मार्टफोन, मोजा, ऐना, पर्दा, बिजुली, ढोका, एयर कन्डिसनर, टिभी, डेस्क, पाठ्यपुस्तक, मिठाई, वालेट, चश्मा...
के तपाईले सबै कुरा जापानीमा भन्नुभयो?माथि हेर्नुहोस् र "शब्दहरू" लेख्नुहोस् जुन तपाईंले भन्न सक्नुहुन्न। र अर्को दिन फेरि भनौं।
अर्को, नजिकैको "चीजहरू" बारे कुरा गरौं।
छोटो वाक्य राम्रो छ। झूट होइन सत्य कथा सुनौं।
हालै,कम्प्युटरमलाई सन्चो छैन।
अब,एयर कंडीशनरसंलग्न छ।
· योखाजासस्तो र सिफारिस गरिएको छ।
・TV सेटत्यहाँ छ, तर म धेरै देख्दिन।
· नयाँचश्माकिन्ने सोचमा छु।
के तपाईंले कोठामा के छ भनी "छोटो वाक्य" मा भन्नुभयो? भन्न सक्नु हुन्न भने"छोटो वाक्य" हेर्नुहोस् र यसको नोट बनाउनुहोस्। र भोलिपल्ट फेरि भन्नेछु।
यदि तपाइँ नोटहरू हेर्नुहुन्छ र हरेक दिन अभ्यास गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ कोठामा "चीजहरू" बारे कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यो अनलाइन पाठहरूको लागि धेरै उपयोगी छ, जब साथीहरू हामीलाई आउँछन्, वा जब तपाईं छोटो कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ। कृपया यसलाई प्रयास गर्नुहोस्।
तपाईको शौक के हो? तपाईलाई कस्तो प्रकारको भिडियोहरू, पुस्तकहरू, एनिमे र खेलहरू मनपर्छ? के तपाईं आफ्नो "मनपर्ने चीजहरू" जापानी भाषामा भन्न सक्नुहुन्छ?
मनपर्ने खेलहरू, मनपर्ने नाटकहरू र एनिमे, मनपर्ने खेल शीर्षकहरू, मनपर्ने YouTubers, मनपर्ने मङ्गा र पात्रहरू, आदि।
"छोटो वाक्यमा मनपर्ने 〇〇" को बारेमा कुरा गरौं।
・ मेरो मनपर्ने चरित्र (एनिमेसन, आदि) 〇〇 हो।
・ जापान आउनु अघि (खेलकुद आदि), म XX गर्दै थिएँ।
・ मलाई नयाँ 〇〇 (गेम कन्सोल, आदि) चाहिन्छ, तर मसँग पैसा छैन।
・ म नयाँ चलचित्रहरू (चलचित्रहरू, आदि) को लागी हेर्दै छु।
・ म मेरो स्मार्टफोन (Youtube, आदि) मा XX भिडियोहरू हेर्दै छु।
यदि तपाइँ यो भन्न सक्नुहुन्न भने, तपाइँ के भन्न चाहनुहुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् र यसलाई नोट गर्नुहोस्।
र अर्को दिन फेरि अभ्यास गरौं।
र कृपया हामीलाई तपाईंको "मनपर्ने चीजहरू" बारे थोरै बताउनुहोस्।
पहिले भन्दा लामो वाक्य बनाऔं।
・ (वर्ण, आदि) 〇〇 राम्रो र धेरै बलियो छ।
・ म हरेक हप्ता (खेलकुद, आदि) मेरा साथीहरूसँग खेल्न उत्सुक छु।
・ (गेम कन्सोलहरू, आदि) म यो बच्चा छँदादेखि गर्दै आएको छु।
・ (चलचित्र, आदि) म सधैं एक्लै 〇〇 चलचित्रहरू हेर्न जान्छु।
・ (Youtube) 〇〇 भिडियोहरू रोचक हुन्छन्, त्यसैले म तिनीहरूलाई हरेक रात हेर्छु।
यदि तपाईंले आफ्नो "मनपर्ने चीजहरू" SNS मा लेख्नुभयो भने, उही "मनपर्ने चीजहरू" भएका मानिसहरूले टिप्पणी गर्न र साथी बनाउन सक्छन्। कृपया आफ्ना धेरै "मनपर्ने चीजहरू" को जापानी भाषामा परिचय दिनुहोस्।
"तिमी साताको दिन र सप्ताहन्तमा के गर्छौ? हामी सधैं "तिमी के गर्दै छौ?" र "तिमी बिदामा के गर्दैछौ?" जस्ता प्रश्नहरू सोध्छौं?
के तपाइँ तपाइँको सामान्य जीवन को बारे मा छोटो वाक्य मा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ?
・ मसँग जागिर / अंशकालिक काम छ।
・ गृहिणी / गृहिणी।
·म विद्यार्थी हुँ। म पढ्दै छु 〇〇।
・ म XX मा काम गर्नुहुन्छ
· म जागिर खोज्दै छु।
थोरै विस्तारमा कुरा गरौं।
कहिले, कुन दिन, के गर्दै हुनुहुन्छ ?
・ म हरेक रात खेल खेल्छु।
・ हरेक आइतबार साथीहरूलाई भेट्नुहोस्।
・ म बुधबार चलचित्र हेर्न जान्छु।
・ काम पछि, मैले एउटा किताब पढें।
・ म हप्तामा दुई पटक किनमेल गर्छु।
तपाईंले राम्रोसँग भन्न नसक्ने शब्दहरू माथि हेर्नुहोस्, लेख्नुहोस् र अभ्यास गर्नुहोस्।
र परिवार, साथीहरू र सहकर्मीहरूको बारेमा कुरा गर्न सक्षम हुनुहोस्।
・ मेरो भाइ हरेक रात खेल खेल्छ।
・ मेरी श्रीमतीले अर्को आइतवार आफ्ना साथीहरूलाई भेट्नेछिन्।
・ मेरा साथीहरू हरेक हप्ता चलचित्र हेर्न जान्छन्।
・ सहकर्मीहरू सधैं काम पछि आफ्नो स्मार्टफोन हेर्दै छन्।
・ केटाकेटीहरू स्कूल पछि क्र्याम स्कूल जान्छन्।
म साताको दिन र सप्ताहन्तको बारेमा विभिन्न मानिसहरूसँग कुरा गर्छु। तपाईंले आफ्ना छिमेकीहरू, साथीहरू, सहकर्मीहरू, सुपरमार्केट वा सुविधा स्टोर क्लर्कसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ (यदि तपाईं चाहनुहुन्न भने तपाईंले कुरा गर्नुपर्दैन)। म यो गर्न सक्छु। कृपया यसलाई प्रयास गर्नुहोस्।
"शब्दहरू" याद गर्दा, "शब्दहरू" मात्र याद गर्न गाह्रो हुन्छ।
छोटो वाक्यमा "शब्दहरू" अभ्यास गरेर तपाइँ सरल कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाइँ "शब्दहरू" सिक्न चाहनुहुन्छ भने, छोटो वाक्य बनाउनुहोस्। र त्यो वाक्य भन्न प्रयास गर्नुहोस्। यो तपाईंको आफ्नै कोठामा अभ्यास गर्न लाजमर्दो छैन।
हामी तपाईंलाई जापानी भाषा अध्ययन गर्न सहयोग गर्न जारी राख्नेछौं!
म क्युशुका जापानी भाषा विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा जापानी भाषा पढाउँछु। मलाई खेल र मङ्गा मन पर्छ। म जापानी भाषा सिक्नेहरूका लागि स्थानीय जापानी भाषा कक्षा सिर्जना गर्न एक संयोजक र वेब लेखकको रूपमा पनि काम गर्छु।